anal 013 Silicone rabbit tail metal anal plug – MM Online Shopping
anal 013 Silicone rabbit tail metal anal plug
available color black , red ,pink , white
both zawgyi and unicode version
စတီးအလုံးဖြစ်သည့်အတွက်ချောမွှေသော မျက်နှာပြင် ရှိပြီး သန့်ရှင်းရေး လုပ်ရတာလွယ်ကူပီး
သံချေးမတက် ၊ပျက်စီးခြင်းမရှိ ၊အနံအသက်မရှိသောကြောင့် လုံခြုံစိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်.
စတီးလုံးကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် အမျီုးသမီးအား အနည်းငယ်ယားယံမူကို ခံစားရစေခြင်း၊ sensitive ဖြစ်သော အစိတ်အပိုင်းများကို လှုံဆော်ပေးခြင်းတို့ကြောင့် ..အပျိုးကာလတွင် သင်တို့ ၂ဦးစလုံး ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားမူ ဖြစ်စေမှာ အမှန်ပင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကစားနည်းများကစားရာတွင် အစပျိုးအနေဖြင့် အသုံးပြုရာတွင် သင့်တော်သောအတွက်ကြောင့် ဘော်ဒါတွေအကြိုက်တွေစေမှာခင်ဗျာ
စတီးအလုံးဖွဈသညျ့အတှကျခြောမှသေော မကျြနှာပွငျ ရှိပွီး သနျ့ရှငျးရေး လုပျရတာလှယျကူပီး
သံခြေးမတကျ ၊ပကျြစီးခွငျးမရှိ ၊အနံအသကျမရှိသောကွောငျ့ လုံခွုံစိတျခစြှာအသုံးပွုနိုငျပါတယျ.
စတီးလုံးကိရိယာတပျဆငျခွငျးဖွငျ့ အမြီုးသမီးအား အနညျးငယျယားယံမူကို ခံစားရစခွေငျး၊ sensitive ဖွဈသော အစိတျအပိုငျးမြားကို လှုံဆျောပေးခွငျးတို့ကွောငျ့ ..အပြိုးကာလတှငျ သငျတို့ ၂ဦးစလုံး ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားမူ ဖွဈစမှော အမှနျပငျဖွဈပါတယျခငျဗြာ
လိငျပိုငျးဆိုငျရာ ကစားနညျးမြားကစားရာတှငျ အစပြိုးအနဖွေငျ့ အသုံးပွုရာတှငျ သငျ့တျောသောအတှကျကွောငျ့ ဘျောဒါတှအေကွိုကျတှစေမှောခငျဗြာ
Categories: Anal, Sex Toys
Be the first to review “anal 013 Silicone rabbit tail metal anal plug” Cancel reply